त्यागी 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.Online बाट मजा लिनुहोस्
एक्लो एक छ एक व्यक्ति को लागी कार्ड खेल। खेल एक्लै खेल्ने भएकोले, मुख्य उद्देश्य एक विपक्षीलाई हिट गर्नु होईन, तर खेल समाधान गर्न, आफ्नो तार्किक सोचलाई प्रशिक्षण दिनुहोस्, र कहिलेकाँही यो ध्यानका लागि प्रयोग गरिन्छ।
त्यागी: चरण-देखि कसरी खेल्ने? 🙂
एक बनाउन एक्लो नि: शुल्कका लागि अनलाइन, तपाईंसँग गर्नुपर्ने छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
2 चरण। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं मात्र गर्न छ हिट खेल र तपाइँ सबैभन्दा बढी मन पराउनुहुने त्यागी छनौट गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ कठिनाइ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको खेलको स्तरको लागि उपयुक्त छ।
यसलाई छनौट गरेपछितपाई पजलमा भएको टुक्राहरूको संख्या पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
4 चरण। सबै कार्डहरू विनबाट हटाउन को लागी प्राप्त गर्नुहोस्। यसको लागि तपाईंले यी कार्डहरूलाई कार्डको धेरै डेकमा राख्नुपर्दछसमान रंग र एक अर्डर क्रममा।
5 चरण। एउटा खेल समाप्त भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् "फेरी सुरु" अर्को त्यागी बनाउन
त्यागी भनेको के हो? 😀
एक्लो (फ्रान्सेलीमा सोलिटेयर वा सोलिटेयर पनि भनिन्छ) एक व्यक्तिको लागि कार्ड गेम हो। फ्रान्सेलीबाट अनुवादको बारे यो धेरै राम्रो देखिन्छ। अनुवादित, यसको मतलब हो "धैर्य"। विभिन्न प्रकारको डेकहरू त्यागी खेल्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, दुबै स्पेनिश माललेट कोमो पोकर.
त्यहाँ छन् बिभिन्न प्रकारहरु त्यागी को कि हामीलाई मजा लिन धेरै सुझाव को लागी अनुमति दिन्छ।
यसको सफलताको एक मुख्य कारण एकल व्यक्ति खेल्ने सम्भावनामा आधारित छ, प्रतिद्वन्द्वी बिना। आराम र ध्यान दिन यसलाई उत्तम खेल बनाउँदै।
त्यागी कहानी 🤓
एक्लो छ कार्डका विभिन्न प्रकारका खेलहरूका लागि नाम। तिनीहरू मध्ये सबै भन्दा राम्रो चर्चित खेल "भनेर चिनिन्छक्लासिक त्यागी"खेलको वास्तविक उत्पत्ति अज्ञात छ, तर कार्डहरूको व्यवस्था टैरो कार्डबाट आउँदछ जुन टोली टोलीका लागि प्रयोग गरिएको थियो। १ XNUMX औं शताब्दीको अन्तमा, खेल उत्तरी यूरोपमा पहिलो पटक उल्लेख गरिएको थियो, र खेल लिए फ्रान्स १ th औं शताब्दीको शुरुमा।
१ap१1816 मा सेन्ट हेलेनाको निर्वासनमा नेपोलियन बोनापार्टले अक्सर सोलिटेयर खेलेको खबर पाइन्छ। त्यसपछिका वर्षहरूमा, यो खेल फ्रान्सको लोकप्रिय मनोरञ्जन भयो र अन्ततः जर्मनीलगायत विश्वका अन्य ठाउँहरूमा पनि विजय हासिल गर्यो। धेरै एक्लो सर्तहरू (उदाहरणका लागि, "बाकस") फ्रान्सेलीबाट आएका हुन्।
आज पनि, यो प्रख्यात खेल अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लागि एक लोकप्रिय शौक हो। तपाईलाई चाहिएको सबै एक हो कार्डहरूको डेक, एक सीधा सतह, र केही साधारण नियमहरू। व्यावहारिक रूपमा सबैजनाले यो खेल खेल्न सक्छन्।
एक्लो छ मनोरन्जनको जटिल रूप त्यस्तो समयदेखि जब मानिसहरूसँग अझै समय थियो र संसार अझै यस्तो हडबडमा परेको थिएन। यदि तपाईं क्लासिक रूपमा (हातैले) वा भर्खरको कम्प्युटरमा खेल्नुभयो भने यसले केही फरक पार्दैन - यसले तपाईंको दिमागलाई आराम दिन्छ र तालिम दिन्छ र आज भन्दा बढी लोकप्रिय छ!
कम्प्युटरमा त्यागी खेल को इतिहास
पहिलो पीसी मार्केटमा उपलब्ध भएपछि, यसमा सोलिटेयरको डिजिटल संस्करण प्ले गर्न यो तार्किक चरण मात्र थियो। एक स्क्रिनमा कार्ड खेल्न अपेक्षाकृत आवश्यक छ सानो कम्प्युटिंग शक्ति, छोटो समयमा ठूलो संख्यामा खेल देखा पर्‍यो। MS-DOS को समयमा, अधिकतर खेलहरू पाठ-आधारित र केवल एक खेलाडीको लागि लक्षित थियो।
यद्यपि, कम्प्युटरहरू छिटो र अधिक आधुनिक हुँदै गयो, जसले गर्दा खेलहरूका लागि ग्राफिकल सम्भावनाहरू पनि सुधार भयो। बढेको मेमोरी क्षमताले प्रोग्रामरहरूलाई एकल प्रोग्राममा धेरै खेलहरू फिट गर्न पनि अनुमति दियो। यसैले सोलिटेयर खेलहरूको सम्पूर्ण संग्रहहरू सिर्जना गरियो।
पहिलो व्यावसायिक संग्रह "त्यागी रोयालेयो ब्राड फ्रेगरले लेखेका थिए र १ 1987 16 मा स्पेक्ट्रम होलोबाइटले जारी गरेका थिए। यो खेल दुबै पीसी (एमएस-डोस) र म्याकोन्टोसको लागि उपयुक्त थियो। यसमा आठ फरक फरकहरू छन्, १ E ईजीए ग्राफिक्स रंगको साथ दौडिएको थियो, र माउस संचालित थियो।
केही वर्ष पछि, १ 1992 XNUMX २ मा, QQP (क्वान्टम क्वालिटी प्रोडक्शन्स) ले ठूलो संग्रह सुरू गर्यो "त्यागी यात्रायो खेल एमएस-डोसको लागि पनि जारी गरिएको थियो र १०izz विभिन्न खेलका भिन्नताहरूको डिज्इ number नम्बर समावेश गरिएको थियो, साथै प्रत्येक खेलका लागि विस्तृत तथ्या statistics्कहरू पनि थिए! खेलाडीहरूले केहि खेलहरू छनौट गर्न सक्दछन् र उनीहरूको आफ्नै ट्रिप्स (ट्रिपहरू) मात्र व्यवस्थित गर्न सक्दैनन्, मिसनहरु (क्वेस्ट्स) मा पनि भाग लिनुहोस् र केहि राउन्ड जितेर त्यहाँ थप अ points्कहरू कमाउनुहोस्।
माईक्रोसफ्ट विन्डोज त्यागी यो पहिलो पटक विन्डोज 3.0.० मा १ 1990 1995 ० मा देखा पर्‍यो। १ 95 XNUMX In मा विन्डोज XNUMX ले फ्रीसेल खेल जारी गर्‍यो। फ्रीसेल कुनै समय मा धेरै लोकप्रिय भयो, र खेल को वैकल्पिक शेयरवेयर संस्करण को एक ठूलो संख्या देखा पर्‍यो। अन्तमा, त्यागी Microsoft XP स्पाइडरको साथ देखा पर्‍यो, नयाँ दस्तकहरू र सुधारिएको संस्करणहरू द्वारा अनुगमन।
आज, खेलहरू ट्याब्लेटहरू र स्मार्टफोन सहित, हरेक कल्पना योग्य प्लेटफर्मको लागि उपलब्ध छन्। तपाईं जहाँ भए पनि, सॉलिटेयरको एक प्रकार सधैं आराम र आनन्दको लागि उपलब्ध हुन्छ!
कसरी त्यागी खेल्ने: सल्लाहहरू ️ ️ ♠ ️ ♣ ️
सुझाव १: तल सलिटेयर कार्डहरूसँग तल काम गर्नुहोस्
एकल, तपाईंले निश्चित रूपमा निम्न कार्डहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ, किनकि यी स्ट्याक्सहरू पहिले खाली गर्न आवश्यक छ।
हेर्नुहोस् यदि तपाईं निम्न कार्डहरू एक अर्को माथि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एकै साथ धेरै कार्डहरू सार्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईंले मार्गदर्शकको रूपमा थोरै कार्डहरूसँग पाइल प्रयोग गर्नुपर्छ।। यस तरिकाले तपाईंले तल छिटो खाली सीट पाउनुहुनेछ।
त्यसोभए तपाईं फेरि खाली ठाउँहरू तुरून्त भर्न सक्नुहुनेछ। केवल शीर्ष स्ट्याकलाई उजागर गर्नुहोस् जब तपाईं तलको अर्को चाल बनाउन सक्नुहुन्न।
सुझाव २: प्रत्येक ऐस तुरुन्त उठाउनु पर्छ
याद गर्नुहोस् तुरुन्तै ऐस सार्न।
यो तल्लो ढेर मध्ये एक हो कि ऐस को लागि विशेष गरी साँचो हो। तपाईं आफ्नो हातले ती स्थानहरूलाई खाली स्थानमा धकेल्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, ace मा दुई पटक क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंले शीघ्र माथि टाउकोको थाकमा एसेसहरू पनि सार्नु पर्छ। तसर्थ, तपाईंसँग कम पाइलहरू मध्ये एउटाबाट बढि कार्डहरू सार्ने अवसर हुन सक्छ।
सुझाव:: खाली स्थानमा लोन किंग राख्नुहोस्
ब्याट्रीलाई राम्रोसँग काम गर्नुहोस्। तपाईंलाई राजाहरूको लागि क्लियरन्स चाहिन्छ।
मसँग सित्तैमा भएपछि, राजाले भर्नु पर्छ एक पछि अर्को सबै अन्य कार्डहरू स्ट्याक गर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाईले पत्रहरू तल राख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं दुई राजा बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँले धेरै जसो कार्डहरू स्ट्याक गर्न सक्नुहुनेछ जुन रंगमा ध्यान दिनुहोस्।
समान दुई नि: शुल्क ठाउँहरूमा पनि लागू हुन्छ। आदर्श रूपमा यसलाई कालो राजा र एक पटक रातो राजाले भर्नुहोस्। यसले एकै समयमा धेरै कार्डहरू खेल्न सक्षम हुने सम्भाव्यता बढाउँदछ।
सुझाव 4: कार्डहरू परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईं आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्न वा यदि तपाईंलाई केहि पनि तार्किक लाग्दैन भने, तपाईं परिवर्तन हुनुपर्दछ।
कार्डमा हेर्नुहोस् र ती दुई बीच स्विच गर्नुहोस् ताकि तपाईं केहि कार्डहरू माथि राख्न सक्नुहुनेछ।
परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ र प्रायः खेल मास्टर गर्ने एक मात्र तरिका।
यदि तपाईंले कुनै थप ट्रेनहरू देख्नुभएन भने, आईटममा क्लिक गर्नुहोस् "सुझाव"मेनूमा। केहि खेलहरूको साथ तपाईं कुञ्जीपाटीमा" T "थिच्न पनि सक्नुहुन्छ र खेलले के देखाउँदछ सम्भव छ भनेर देखाउँदछ।
त्यागी प्रकार 🃏
त्यागी को विभिन्न रूपहरु छन्, जुन एक भन्दा बढि डेक र प्लेयरबाट बिभिन्न कौशल स्तरहरू आवश्यक पर्दछ। तलको सूचीले सोलिटायरका बिभिन्न प्रकारहरूलाई समेट्छ, क्लासिक क्लान्डाइक र स्पाइडरदेखि खेलहरू कि गति चाहिन्छ वा केटीहरूको लागि, जहाँ तपाईं कार्डहरू सोध्नुपर्दछ र प्रत्येक मोडेलको लुगा लगाउनुपर्दछ।
क्लासिक को क्लासिक! कार्ड Ace किंगमा अर्डर गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सूटको अनुसार अलग गरेर। यो गर्नका लागि, कार्डहरूलाई स्तम्भहरूमा अलग गर्नुहोस् क्रमबद्ध गर्दै, सँधै रातो र कालो कार्डको बिचमा, पूर्ण डेक प्रकट नभएसम्म। जब तपाइँ एस फेला पार्नुहुन्छ, स्क्रिनको शीर्षमा यसलाई फैलाउनुहोस् र त्यसमा समान सूटको अन्य कार्डहरू राख्नुहोस्।
अघिल्लो भन्दा थोरै फरक, यो त्यागी मा तपाईं राजा देखि Ace गर्न कार्ड संगठित गर्नु पर्छ। साथै, तपाईंसँग टेबलमा केवल एउटा सूट छ, जबकि कार्डहरू धेरै पटक दोहोरिने छन्, तपाईंलाई एक भन्दा बढी अर्डरली अनुक्रम गर्न अनुमति दिँदै।
यस खेलको उद्देश्य होs कार्डको सम्पूर्ण पिरामिड हटाउनुहोस्, तिनीहरूलाई जोडा मिलाउन जोडी तेह्र सम्म थप्नुहोस् उनीहरूलाई पर्दाबाट हटाउनको लागि। पिरामिडमा राखिएका कार्डहरू बाहेक, तपाईंसँग तीन थप कार्डहरू छन् जुन अन्यहरूलाई मेटाउन प्रयोग गरिनुपर्दछ र तल रहेको कार्डहरू खाली गर्नुहोस्, साथै थप कार्ड खाली गर्नुहोस् कार्डमा एक अलग गर्न।
मार्गलाई "मार्ग" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ र यसले यस खेलको उद्देश्य र म्याकेनिक्सको राम्रो पूर्ति गर्दछ। तपाईंले प्रत्येक अनुहारको संख्याको आधारमा उनीहरूसँग सामेल हुन, कार्ड मार्गहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ, आरोही वा अवरोही क्रममा। प्रत्येक कार्ड केवल एक पूर्ववर्ती वा पूर्ववर्ती कार्ड वा जोकरहरू मध्ये एकमा लिंक गर्न सकिन्छ।
यहाँ तपाईंले कार्डहरू जोडीमा राख्नु पर्छ जुन तेह्रसम्म थप, पिरामिड त्यागी जस्तो। जब तपाईं कार्डहरू पाइलको माथिबाट हटाउनुहुन्छ, अर्को पनी उल्टाइनेछ, नयाँ सम्भावनाहरू खोल्दै तपाईंसँग चारवटा कार्डहरू जोड्नुहोस्।
कम्तिमा यो खेलमा गति गणना गर्दछ। कम्प्युटरको बिरूद्ध, तपाईं चाँडो हुनुपर्दछ र तपाईंको पाइलबाट सबै कार्डहरू हटाउनुपर्दछ। यसो गर्नका लागि, तपाइँको कार्डहरू स्क्रीनको बीचमा दुई स्ट्याकहरू मध्ये एउटामा राख्नुहोस्, तल कार्डको संख्या अनुसार यो टेबलमा रहेको कार्ड भन्दा केवल एक अंक मात्र माथि वा कम हुनुपर्छ।
अर्को खेल जुन प्रत्येकको संख्याको आधारमा कार्डहरूको उन्मूलनसँग सम्बन्धित छ। भिन्नता त्यो हो तपाईंले तल तीन टावरहरू बाट महल स्वतन्त्र गर्न कार्डहरू हटाउनु पर्छ, सँधै स्क्रिनको तल हाइलाइट गरिएको कार्डको मान अवलोकन गर्दै।
धैर्य र फेसन सँगै, एक धेरै रमाइलो खेलमा। तपाईंले स्क्रीनमा भएका सबै कार्डहरू एकै समयमा समाप्त गर्नुपर्दछ जुन तपाईं प्रत्येक मोडेलको लुगा लगाउँनुहुन्छ। तलको कार्डहरू स collect्कलन गर्न, यसै प्रकारको कार्डहरूलाई स्ट्याक गर्नुहोस्, ध्यानमा लिनुको साथसाथै: केही मोडेलहरूका रंगहरू, प्रिन्टहरू र शैलीहरूको लागि प्राथमिकताहरू हुन्छन्।
कुनै श doubt्का बिना, सबै भन्दा चाखलाग्दो। तपाईंले स्क्रिनबाट कार्डहरू हटाउनु पर्छ संयोजनको संयोजनमा माजोङ र मेमोरी खेल: तिनीहरूलाई जोडीमा राख्नुहोस् जुन तल अवस्थित कार्डहरू घुमाउनको लागि, र कार्डहरू खोल्नको लागि जुन लक छ, एक कोर कुञ्जीको साथ कार्डहरू खोज्नुहोस्।